Wutyee Food House ဟင်းလက်ရာ (၁၀၃)မျိုး စာအုပ်သစ် | Wutyee Food House
ဟင်းချက်နည်း – ၁၀၃မျိုး
၀ယ်ယူနိုင်သည့် နေရာ – စာအုပ်ဆိုင်တိုင်း၊ City Mart၊ Ocean Supermarket၊ Capital၊ Better Day Media Publication (၀၁-၂၄၀၁၅၁၊ ၀၉၅၀၃၃၉၁)
ယခု ထုတ်ဝေသည့် ဟင်းချက်စာအုပ်တွင် အရသာထူးခြားပြီ ဆန်းသစ်သည့် ဟင်းချက်နည်း အသစ် အမျိုးပေါင်း (၁၀၃)မျိုးကို ချက်ပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် တကွ တွဲဖက် ဖော်ပြပေးထားသည်။
မြန်မာဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ တရုတ်ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ တောင်ပိုင်း အိန္ဒိယဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ဂျပန် ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ Healthy & Diet ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ သက်သက်လွတ် ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ နှင့် ကင်နည်းများ စုစုပေါင်း ဟင်းချက်နည်း (၁၀၃)မျိုးလုံးကို တစ်စုတစည်းတည်း စာအုပ် တစ်အုပ်တည်းမှာ ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟင်းချက်နည်းများကို လိုက်လံ ချက်ပြုတ်ရာမှာ လွယ်ကူစေရန်အတွက် ချက်ပုံ အဆင့်ဆင့်နဲ့ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်း အချိန်အတွယ် အတိအကျကိုပါ ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ ဟင်းလျာများကို ချက်ပြုတ်ရင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း Wutyee Food House မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
Cooking Book Contents
ကြံသကာ နှင့် ငါးသလောက်ပေါင်း
ရဲယိုရွက် နှင့် ငါးပေါင်းထုပ်
အညာထမင်းသုပ် နှင့် ပုဇွန်ထုပ်ကြော်
တရုတ် ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
ခေါက်ဆွဲ နှင့် ၀က်အာပူလျှာပူ
ကြက်တောင်ပံ အစာသွပ်နှင့် ဂျင်းဆော့
တရုတ်စတိုင် ကောက်ညှင်း မြေပဲ အစာသွပ်မုန့်
တောင်ပိုင်း အိန္ဒိယဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆိတ်သား ဒိန်ချဉ် ဟင်းလျာ
အုန်းနို့ပုဇွန် ရနံ့သင်း ဟင်းလျာ
အိန္ဒိယစတိုင် ပဲနီလေး ဟင်းချို
၀က်သားအကြွပ်ကြော် Tonkasu ဆော့စ်
Teriyaki စတိုင်လ် အမဲသားနှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော်
ကြက်သား Teriyaki ဆော့စ်
Soba ခေါက်ဆွဲ နှင့် တူနာ အရွက်စုံသုပ်
Udon ခေါက်ဆွဲပြုတ်နှင့် တန်ပူရာကြော်
နိုင်ငံတကာ ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဖိလိပိုင်စတိုင်လ် အမဲသား၊ sausage နှင့် သီးရွက်စုံစတူး
Adobo ကြက်သား ငရုတ်ကောင်း
အီတလီစတိုင်လ် ပုဇွန်ပါစတာ မာရီနာရာ
အီတလီယျံခေါက်ဆွဲ နှင့် ကြက်သားမှို့ဆော့စ်
ထိုင်းစတိုင်လ် ကြက်အူချောင်း နှင့် သခွာသီးသုပ်
အဆာပြေ ပုဇွန်၊ သီးရွက်စုံသုပ်
Healthy & Diet ချက်ပြုတ်နည်းများ
အမဲသား broccoli ကြော်
ဆန်လုံးညို ဟင်းရွက်စုံ ထမင်းကြော်
အရသာစုံ ပုဇွန်၊ နာနတ်သီး ဆလတ်သုပ်
ဆယ်လ်မွန်ငါး နှင့် သစ်သီး ဆလတ်သုပ်
ဆယ်လ်မွန်ငါ်းခရင်မ်ဆော့စ် နှင့် ဟင်းနုနွယ်
ကြက်ရင်ဗုံသား၊ ကညွှတ် နှင့် မှိုကြော်
Tortilla နှင့် တူနာဒိန်ချဉ် ဆလတ်သုပ်
တူနာ၊ ဂျုံကြမ်းပါမုန့် နှင့် ဆမ်ဝေ့
သက်သက်လွတ် ဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများ
အာလူး ခရမ်းသီး အချိုချက်
ဂေါ်ရခါးသီး နှင့် မှိုဟင်းချို
တရုတ် မုန့်ညှင်း အချိုကြော်
ပန်းသစ်တော်သီး နှင့် ပျားရည်ပေါင်း
ကြက်ရင်ဗုံ နှင့် ပေါင်ကင်
Summer စတိုင်လ် ကြက်ကင်
၀က်အူချောင်းကင်နှင့် Garlic Bread
Tortilla ချိစ် နှင့် ခရမ်းချဉ်သီးကင်
Hninn Pwint Phyu says:
ဒီနေ့မှ နယ်တွေက စဖြန့်တာပါ sis။ ရန်ကုန်မှာတော့ စာအုပ်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ရောက်နေပါပြီ။ အားပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် <3
where can I buy this book? I am in India.
You just can buy at Myanmar. Thanksalot 😀
How do you make ngan bya ye kyaw? pleas can I have the recipe?
အရင်က (၁၀၁) (၁၀၂) စာအုပ်တွေ နဲ့ တူလားအစ်မ..
အဲ့ဒီသုံးအုပ်က တစ်အုပ်နဲ့ တစ်အုပ် နည်းတွေက မတူကြဘူးလားအစ်မ..
တစ်အုပ်နဲ့ တစ်အုပ် ဘာများကွာခြားလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင့်..
၀ယ်ယူအားပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ပါပဲ အစ်မ <3 <3
ဟုတ်ကဲ့ sis။ အရင်(၁၀၁)မျိုး၊ (၁၀၂)မျိုး စာအုပ်တွေနဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ မတူပါဘူး။ ဟင်းလက်ရာ(၁၀၃)မျိုးစာအုပ်က ဟင်းချက်နည်း အသစ်(၁၀၃)မျိုးကို စုစည်းပြီ ထုတ်ထားတာပါ။ အားပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်.. 🙂
Good news!! ဒီတစ်ခါတော့ဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်မယ်အစ်မရေ 🙂
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် sis <3 <3
ဒီနေ့မှ နယ်တွေ စဖြန့်တာမို့ တနင်္လာနေ့ဆိုရင် မန်းလေး စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ယူလို့ရပါပြီ Thanksalot 😀
Seven diamond says:
methods are easy to follow, I’ll try …
How can i get that book from United States
၀တ်ရည်စာအုပ်ထဲကနေ လက်တွေ့ကြိုးစားခွင့်လေးတွေရလို့ ကျေးဇူးပါကွယ် ♥♥♥
Thura Min Htet says:
I wanna this Book.How can i down load.Please send download link in my mail ThankYou.
Lei Lei Maw says:
Would like to buy your cook book series. Can buy online?
htat naing linn says:
စာအုပ်ကို online ကနေ ဝယ်လို့မရဘူလား?